ठाडो चन्दन लाएर र सिन्दुर देखाएर राजनीति गर्न छोड्नुस्, सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउनुस् ! « News of Nepal
ठाडो चन्दन लाएर र सिन्दुर देखाएर राजनीति गर्न छोड्नुस्, सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउनुस् !
महिला अधिकारवादी दक्षिण एसियाली नेतृ
दक्षिण एसियाकै चर्चित नारीवादी नेत्री कमला भासिन विगत केही सातादेखि काठमाडौंमा हुनुहुन्छ। हरेक वर्ष नेपालमा आयोजना हुने एक महिना लामो लैङ्गिक समानतासम्बन्धी बहुचर्चित संगति तालिम, जहाँ दक्षिण एसिया क्षेत्रका युवा महिला अधिकारकर्मीहरू सरिक हुन्छन्, त्यसको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा उहाँ नेपाल आउने गर्नुहुन्छ। नेपालमा अहिले चर्चित रहेका लैङ्गिक अभियन्ताहरूका समेत प्रशिक्षक भासिन हिजै शनिबार मात्र पनि उर्लंदो सय करोड अभियान २०२० को घोषणा सभाका मुख्य सहभागीका रूपमा सरिक हुनुभयो। प्रस्तुत छ, भासिनसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि कपिल काफ्ले र भगवती तिमल्सिनाले लिएको अन्तर्वार्ता ः
एसियाली मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धिको काममा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा समाजमा न्याय, समानता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका लागि काम गरें। त्यतिबेला नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानमा म कुनै एनजीओको बारेमा केही जान्दिनथें। मेरो पहिलो काम थियो नागरिक समाजका संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु।
अन्त्यमा शुभकामना भन्छु। जुन कानुनमा परिवर्तन आएको छ अत्यन्तै राम्रो, तारिफयोग्य कुरा छन्, यसलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउनुस्। नेपालको परिवर्तित कानुनले दक्षिण एसियाकै इज्जत उच्च बनाउन सकोस्